Norway oo Xuduudeeda u fureysa Dadka Sweden ee ka shaqeeya Wadankeeda Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo Xuduudeeda u fureysa Dadka Sweden ee ka shaqeeya Wadankeeda
February 26, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Wararka Sweden 0
Dowlada Noorweey ayaa ku dhawaaqday jimcaha laga bilaabo 1-da Maarso, dadka safarka ah ee ka yimid Sweden iyo Finland ee ka shaqeynaya Norway ay ka gudbi doonaan xadka
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xal u helnay xaalada adag ee ay soo mareen socdaalayaasha xuduudaha todobaadyadii la soo dhaafay,” ayuu yiri Wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada Norway Torbjorn Essaxen.
Noorway waxay codsan doontaa ka dhaafida xayiraada safarka dadka dagan Sweden iyo Finland ee maalin walba u socdaala Norway. Waxaa laga baari doonaa corona toddobadii maalmoodba mar.
“Wadashaqaynta Scandinavian-ka aad ayey muhiim u tahay”. Waxaan garwaaqsan nahay muhiimadda ay leeyihiin ganacsatada ku nool aagagga xudduudda. Kuwa ku nool kana shaqeeya dhinacyada kala duwan ee xadka, toddobaadyadii la soo dhaafay way ku adkayd, waxaana muhiim u ahayd dowladda inay xal deg deg ah u hesho dhibaatada.
Ku dhawaaqista xalka ayaa timid kadib wadahadalo Jimcihii u dhaxeeyay raiisul wasaare Stefan Löfven iyo dhigiisa Norway Erna Solbrey. “Waxaan ku raacsanahay in xaalada dadka safarka ah ee xadka ku sugan ay adagtahay oo ay tahay in la xaliyo,” ayuu Löfven ku yiri faallo uu u qoray TT
Norway ayaa xidhay xadka ay la wadaagto Sweden January 28-keedii si looga hortago xaalada Corona.